जात्रा हेर्न हेलिकोप्टर चार्टर गरेर धादिङ पुगे राज्यमन्त्री रामबीर मानन्धर, पैसा तिर्ने व्यापारी को ? | Diyopost
जात्रा हेर्न हेलिकोप्टर चार्टर गरेर धादिङ पुगे राज्यमन्त्री रामबीर मानन्धर, पैसा तिर्ने व्यापारी को ?
धादिङ, १४ मंसिर । धादिङको उत्तरी भूभाग रुभीभ्याली गाउँपालिका स्थित लापा, तिप्लीङ, रि र झार्लाङका जनता सिटामोल खान नपाएरै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । समयमै उपचार नपाएर मृत्यु हुने नागरिक रहेको देशमा सरकारका एक राज्य मन्त्री भने हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जात्रा हेर्न पुगेका छन् ।
शुक्रबार धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ सल्यानवेशीमा आयोजित त्रिपुरा सुन्दरी माईको मेला हेर्नका लागि सहरी विकास राज्य मन्त्री रामविर माननन्धर अल्टिच्युड एयरको हेलिकोप्टर मार्फत त्यहाँ पुगेका हुन् । गाडीबाट यात्रा गर्दा जम्मा ४ घण्टामा पुग्ने उक्त स्थानमा हेलिकोप्टर लिएर गएपछि स्थानियबासी समेत अचम्ममा परेका थिए ।
सामान्य जात्रामा जाँदा समेत लाखौँ खर्च गरेर हेलिकोप्टरमा यात्रा गर्ने मानन्धरको यात्रा नै शंकाष्पद देखिएको छ । त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओम प्रकाश सुवेदीका अनुसार गाउँपालिकाले महँगो शुल्कमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेको छैन । काठमाडौंबाट धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका ६ स्थित सल्यानबेशी पुग्न हेलिकोप्टरलाई कम्तिमा १ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । उक्त शुल्क कसले बुझायो भनेर अल्टिच्युड एयरका प्रतिनिधि सिताराम सापकोटालाई सम्पर्क गर्दा उनले मन्त्रीसँगै गएका २ युवाले तिरेको बताए ।
उनका अनुसार राज्यमन्त्री मानन्धरसँगै गएका पर्यटन व्यावसायी कुमार थापा ‘अन्जन’ र गणेश रिमालले हेलिकोप्टरको शुल्क तिरेका हुन् ।
केही दिनअघि ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोशियशन अफ नेपाल टानको निर्वाचनमा पराजित भएका थापा ठमेलका विवादास्पद व्यापारी हुन् । थापामाथि समेत फेक रेस्क्यु धन्दा चलाएर पदयात्री पर्यटक ठगी गरेको आरोप छ ।
उनीद्वारा सञ्चालित आसाइ ट्रेकमाथि पर्यटन मन्त्रालयमा उजुरी पर्दा समेत सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वको छानबीन समितिले छानबीन नगरी उन्मुक्ति दिएको आरोप पर्यटन व्यावसायीहरुकै छ ।
धादिङको त्रिपुरा सन्दरी गाउँपालिका ६ सल्यानवेशीमा विगत लामो समयदेखि त्रिपुरा सुन्दरी माइ जात्रा हुँदै आएको छ । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई समेत सहभागी हुने भनिएको थियो ।
अभिभावक संघले भन्यो,‘अनलाइन कक्षाको नाममा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि विभेद भयो’
खाली बाटोमा हुँइकिँदा सावधान : सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु
नेपालगञ्ज तनावमा प्रहरीको ज्यादती : ५६ वर्षीय व्यक्तिलाई घिसारेर २ सय मिटर परसम्म पुर्यायो !
‘कोरोना सर्छ’ भन्दै धादिङ अस्पतालका अध्यक्षले ८२ वर्षे गरिब बृद्धको उद्दार गर्न नमानेपछि…
मृत्युपछि फेरी अर्का व्यक्तिमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ : मृतक संख्या ७ पुग्यो !
एकैदिन एक सय ८९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि : कुल संक्रमित १४ सय एक पुग्यो
कोरोना भाइरस सक्रमणबाट थप १ जनाको मृत्यु : १ सय ७० जना संक्रमित थपिएपछि १ हजार २ सय १२ पुग्यो
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषण शुरु (लाइभ)
थप १ सय ५६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या १ हजार ४२ पुग्यो
एकैदिन १ सय १४ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि, ८ सय ८६ पुग्यो